DAAWO SAWIRRO: Fannaan Caan ah oo shaaciyay inuu gabi ahaan isaga baxay Fanka! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Fannaan Caan ah oo shaaciyay inuu gabi ahaan isaga baxay...
DAAWO SAWIRRO: Fannaan Caan ah oo shaaciyay inuu gabi ahaan isaga baxay Fanka!
Baydhabo (Halqaran.com) – Fannaanka Caanka ah Maxamed Axmed Qoomaal oo iminka ku sugan dhulka barakaysan ee Makkah, isla markaana gudanaya Wajibaadka Alle ayaa mar qura shaaciyay in uu gabi ahaan joojiyay, isagana baxay fanka, uuna jecleestay in uu dhanka Alle iyo cibaadada u jeesto.
Maxamed Axmed Qoomaal ayaa dhammaan ummadda muslimiinta, gaar ah shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in ay ugu soo duceeyaan dariiqa toosan ee uu qaaday.
Sidoo kale, wuxuuna xusay in aanay ku jirin in uu mar kale dib ugu laabto fanka oo uu soo gunaanaday.
Sanadihii ugu dambeeyay Fanaaniin badan oo heesahooda la jeclaa ayaa ku dhawaaqayay in ay soo gunaanadeen, isla markaaana aanay dib u heesi doonin, sidaasna kaga baxayay fanka
Waxaana inta kugu Jiray dhulka Barakaysan uu la Kulmay Culumaaudiin, Waxaana Meesha uu Lagu Gaddoonsiiyay Hadiyado Farxad leh oo isugu jira Kutubo Quraan iyo Kuwa Axaadista.
Fanaanka caanka ah Maxamed Axmed Qoomaal